Broker 24option, ukubuyekezwa mayelana nohlelo olusebenzisayo nokuthi akhayo ngaphezulu ngenxa nasezingeni eliphezulu of service ingenye yezinkampani ezinkulu, anikeza izinkonzo emkhakheni kanambambili ongakhetha zokuhweba emhlabeni. Izenzo lenkampani kulawulwa European Union futhi kulawulwa European Union iziqondiso zezimali (MiFID). Ngosizo yesimanje platform abahwebi uthole ukufinyelela ezintsha amathuluzi lokuhweba kanye ezihlukahlukene amafa. Ukuhweba iyatholakala kusuka kuphi emhlabeni lapho kukhona inthanethi.
Yiziphi izici ezinhle ukuhweba wazibona abahwebi ngokubambisana nenkampani?
Mayelana broker kanambambili ongakhetha 24option ngokuvamile Izibuyekezo zibhaliwe ngendlela enhle, futhi kunezizathu abalulekile kule. amaklayenti Inkampani sixoxe khona professional ukuqeqeshwa isikhungo, lapho wonke umuntu angakwazi ukufunda yonke imininingwane nobunyonici yohwebo. Beginners kwezimakethe uqaphele khona data base ukuthola ukuthi yilokho. Kuye bezibona ezithile abadayisi, angababaza ukubukela video izinkulumo, noma ukufunda e-izincwadi. Iyatholakala webinars ngokuvakashela. Amakilasi bagxile anhlobonhlobo abalaleli, ukuthi wakhushulelwa waphawula amakhasimende nomdayisi njengoba yayo inzuzo ehloniphekile phezu izimbangi. Ukuqeqesha Centre ngaphakathi enkampanini 24option Izibuyekezo ethulwa at zizinhle, kuyinto eyinqaba kubo ngesincomo.
Yini ekhanga amaklayenti lenkampani?
Ukutadisha amazwana eziningi mayelana ngokubambisana ne-broker, okuhle ukuthi ungase uphawule ukugcizelela amaningi idumela yokugcina. Le nkampani ilayisensi by CySEC Cyprus kusukela Regulator Russian futhi TSRFIN. Abahlanganyeli wazwakalisa ukwazisa ngokukhululwa ukunikezwa amasignali zokuhweba khulula bebodwa, kuyilapho abakwazi ukwenza inzuzo, kodwa esihambisana isu elihle ukuba ukwandisa inzuzo. khona Ucansi lumnandi uyajabula akhawunti demo, ivumela ukufunda, hhayi "ukuhlanganisa" imali yangempela. Ngenxa lokususa, abaningi baye baphawula isidingo ukungena imali yabo, ngaphambi kokuqhubeka a ukuhweba test. Ngakolunye uhlangothi, ezinye nabashintshi eziningi, futhi ayinikeze ikhono zohwebo akhawunti wokuhlola.
Insignia - ezindebeni wonke umuntu
Ukutadisha Inkampani Izibuyekezo 24option, ungakwazi bazithole ulwazi broker uthembeke kakhulu. Ukuqinisekiswa amagama zingaba ikhasimende uvuza ezingeni lomhlaba wonke jikelele, ikakhulukazi Grand Prix futhi umahluko emkhakheni ubuchwepheshe zezimali. Kufanele kuqashelwe Forex izikhulu 2013-2014 futhi EGR Operator Imiklomelo Winner 2014. Izinkokhelo, okuyinto inkampani eqhuba amaklayenti zalo kulawulwa MiFID, eyaziwa ngokuthi i-Directive YaseYurophu Izimakethe zezimali. Lokhu kusikisela ukuthi inkampani izibophezele ngokushesha ngangokunokwenzeka ukwenza noma iyiphi inkokhelo, njalo eqondiswa esezingeni "ukwazi ikhasimende lakho". imiklomelo eminingi kuthiwa kwahambisana yokuthi Izibuyekezo inkampani 24option negative - lokhu siyindlala yangempela.
Izibuyekezo Customer izinkokhelo
Ngobusuku obandulela nokubambisana, iklayenti ngamunye uyafundelwa Izibuyekezo Inkampani 24option.com. Ukuhoxiswa imali, kanye nokwethulwa ngokuyiko kwezinhlelo umhlangano - into yokuqala ukuthi kuqhakambisa wonke umuntu nesithakazelo. Ukuba khona lenqwaba izinkampani nomdayisi, okuyinto kokunganaki yokusondela umsebenzi wabo, futhi kuba isizathu esiyinhloko, kwakhulisa isithakazelo izinkokhelo ifomethi. Uma ukholelwa ukuthi Izibuyekezo amaklayenti inkampani ukuhweba sika, babevame ukuthola izinkokhelo zabo, siqala nge ukuhlukumeza okuncane zokukhokha zenqubo. Lokhu lokususa kungenziwa ngokuthi abangelutho ngokumelene isizinda yokuthi ezinye broker ingabe iyanyamalala ngemuva kuziwa izinkokhelo. Mayelana 24option kunzima kakhulu ukuthola izibuyekezo ezimbi. Kunalokho, abantu ukubhala ukuthi bahlanganyela ne inkampani u-Adalberto isikhathi eside. Kukhona amaklayenti abaye baqala ubudlelwano ngisho noma umthengisi azange abe isayithi okuhlanganiswe ngaphansi amaklayenti okhuluma isiRashiya.
izilinganiso Negative akunjalo?
Akekho kanambambili ongakhetha broker ayikwazi ukuhlangabezana izithakazelo kanye nezidingo iklayenti ngamunye. Lokhu kubangela yokucasukela ku-intanethi, ngisho noma inessential. Ake uqale nge iqiniso lokuthi ngendathane izimangalo nokugxeka web yenkampani ayitholakali. izinsolo Fabulous futhi omkhulu ukuthi broker umane engakhokhi, futhi ngeke bakwazi ukuthola. Kukhona izitatimende ezingehli kahle eziphathelene ngalokho okuphambi kwakho uqale ngidayisa ufuna ukuvula idiphozi kokuqala $ 200 zamadola, okuyinto eqenjini elithile zifiki kuyinto isamba eningi kakhulu. Iphuzu lesibili - ukubambezeleka yokukhokha ezingadluli kwezinsuku ezimbalwa, ukuthi ngenxa ezingeni eliphansi bomsebenzi emkhakheni wezezimali uqale ukwethusa. Have intukuthelo ngokuya ukuthi isayithi yephrojekthi zihunyushelwe Russian hhayi ngokugcwele kodwa kancane. abadayisi professional futhi ungaboni lo njengoba nokubi njengoba le platform Ukuhweba lusebenza kahle.
Uyini umthombo Izibuyekezo ezingezinhle?
Ungavumeli ukukhuluma mayelana inkohliso phezu ingxenye 24option ukubuyekezwa. Isehlukaniso ngezinga elikhulu kuhambisana ngendathane ukucasula ku-inthanethi futhi imibiko okwandile yokuntuleka yokukhokha. Endabeni le nkampani, lesi simo akusona ejwayelekile. Bhala ukubuyekeza negative ikakhulukazi Wabasaqalayo abazama ukudayisa ngaphandle ukuqeqeshwa ngaphambi, ewaphula wonke imithetho yokuhweba, kuhlanganise nokuphathwa imali. Nkinga kungenxa yokungabi nokuhlangenwe nakho kule ndaba, hhayi ngenxa ngokubambisana neNhlangano inkampani. Okungenzeka ukuhlangabezana izitatimende ezingehli kahle eziphathelene ngase abeluleki ngubani ayatholakala manje. Abanolwazi emakethe abahlanganyeli azi kahle ukuthi ukusetshenziswa kwazo ezimele ayikwazi ngokuletha inzuzo. IMITHETHO kanambambili ongakhetha ukuhweba kungenzeka kuphela uma ukuhlaziywa owandulelayo emakethe, ne ukunamathela ngokuqinile isu futhi ngosizo amarobhothi. Wokucasukela inkampani kungenziwa ngokuthi bumane nje ukudumala Wabasaqalayo emakethe yezimali imizamo yokuqala ukuhweba.
Ukunakwa kusukela ukwesekwa
Omunye eyinkimbinkimbi kunazo ukuhweba zomculo emakethe yezimali bebelokhu kubhekwe ongakhetha kanambambili. 24option, ukubuyekezwa zazo umthunzi negative ukuthola inkinga, ngokuvumelana abahwebi, ingenye izinkampani best ezisebenza kule ingxenye. isebenze Cishe ngokuphelele ukwesekwa service. Wambonga okubuzwa lo iklayenti angakwazi engamele ukuhweba yabo, sikusiza ukuba sihlaziye isimo emakethe. Kukhona ulwazi nokuthi ngokubambisana neNhlangano ochwepheshe ingafinyelela ehloniphekile ngempela ukuhweba imiphumela. Uma unemibuzo futhi izikhalazo abasebenzi ukuphendula ngokushesha. Bayachaza wonke amaphuzu kwenzalo ukuhlinzeka professional bokusebenza, uma kunesidingo.
www.24option.com iphrojekthi izibuyekezo tinge omubi, njengoba kunjalo nezinye izinkampani ukuthola eziyinkinga kakhulu, inikeza ezingeni sezingeni eliphezulu amasevisi Brokerage. Positioning ngokwaso njengoba inkampani international, broker uzama ukulandela imithetho. Ukwanda esihleliwe amasevisi kalula ezibophweni ezingokwezimali izizathu ezinhle kakhulu izitatimende omuhle amakhasimende yenkampani ukubuyekezwa. Ngokusho abahwebi, inkampani iminyaka eminingi, ekubekeni izindinganiso omusha kule mboni. Ngokubambisana broker uphatha ukuze wonge isikhathi hhayi kuphela, sibonga inkonzo izinga, kodwa futhi imizwa, okuyinto kuqinisekiswa Izibuyekezo nomdayisi 24option.com. Ukuhoxiswa imali uhlala iphuzu eliyinhloko ukuba elincike maqondana ukubambisana.